HETSIKA FARAN’NY HERINANDRO : Anjaranao sisa no misafidy izay metimety aminao
SEHO MIAVAKA 2018
Hanafana ny Le Glacier Analakely i Lola
Seho takariva miavaka no hatolotr’i Lola ireo mpankafy mozika variété etsy amin’ny trano malalaky ny Le Glacier Analakely, ny zoma hariva izao amin’ny 8ora. Hampitsinjaka amin’ny alalan’ireo gadona maro samihafa nampisongadina ny lehilahy teo amin’ny sehatry ny zavakanto izy anio. Hohirainy hanomezana fahafaham-po ireo tonga hanotrona azy amin’io avokoa ny hira nahafantarana azy, toy ny “Lazao” sy “Mampitempo ny Fo”. Ity ihany koa ny seho voalohany hiarahany amin’ireo mpankafy tsy an-kanavaka rehetra eto Antananarivo amin’ity taona 2018. Hafana, araka izany, ny eny an-toerana amin’io fotoana io ary mampanantena ambiansy ireo mpankafy azy hatramin’izay.
Hampirevy ny etsy amin’ny Piment café Behoririka i Samoela
Hampirevy ireo mpankafy azy etsy amin’ny Piment Café Behoririka indray i Samoela, hitondra ny kantony tsy nahafoizan’ny maro azy hatramin’izay. Hizara ambiansy ho an’ireo mpankafy ny mpanakanto mandritra ity alim-pikoranana milamindamina hotontosainy anio ity. Hanomboka amin’ny 9 ora alina ny hetsika ary mampanantena ambiansy ho an’ireo rehetra hanotrona azy ny lehilahy. Hanakoako eny an-toerana avokoa ireo vazon’i Samoela tsy afaka am-bavan’ny maro toy ny “Folaka ihany” sy ny “Hafalina”.
BONNE ANNEE AN’NY AJESA
Hampitsinjaka etsy i Janga Ratah
Mpanakanto mivoy ny gadona Salegy no hanafana ny alim-pandihizana karakarain’ny Ajesa (fikambanan’ny mpianatra avy any Sambava eto Antananarivo) anio. Fantatra eo amin’ny mozika mafana i Janga Ratah, mpanakanto avy any amin’ny Faritra Avaratry ny Nosy iny ny lehilahy. Ambiansy mafana tanteraka no hatolony ho an’ireo tanora tonga hanotrona azy mandritr’ity alim-pandihizana goavana niantsoana azy manokana ity. « Tonga ny ambatako leroa », hoy ny mpanakanto ka vonona tokoa izy amin’io fotoana io hampitoto rebika ny mpankafy rehetra. Ny gadona mozika mafana nahafantarana an’i Janga Ratah teo amin’ny sehatry ny mozika hatramin’izay no hatolony. Tsy voafetra ny fotoana amin’io fa ho mandra-maraina.
Hanapoaka ny Bonara-be 67ha i Iorshy
Hampilanonana sady hampifety amin’ny alalan’ireo mozika milamindamina sy mafana etsy amin’ny Bonara-be Chez Sa-Yah Parking 67ha i Jiorshy anio alina. Manana ny lazany eo amin’ny sehatry ny zavakanto ny tovolahy avy any amin’ny faritanin’Antsiranana ity. Hitondra ireo hirany nampisongadina azy hatramin’izay ny mpanakanto amin’ity alim-pandihizana miavaka hotanterahiny ity, toy ny “Mon chocolat” sy “Zanaka rafoza”. Samy hahazo fahafaham-po avokoa ny rehetra amin’io fotoana io fa indrindra ny mpifankatia na ireo mpankafy mozikam-pitiavana. Tsy ho latsa-danja ihany koa ireo mpankafy mozika mafana ka mampanantena ambiansy ho azy ireo ny tovolahy. Hanomboka amin’ny 9 ora ny fety ary tsy voafetra ny fotoana.